ठूलो मुद्रा Slingo बोनस |
तपाईं मूलतः स्लट र बिंगो को संयोजन जो Slingo खेल को एक प्रशंसक छन् भने, त्यसपछि ठूलो मुद्रा Slingo बोनस निश्चित चलाएर हेर्नुहोस् लायक छ. त्यहाँ एक छैन तर6स्थानहरू जहाँ तपाईं यो खेल खेल्न सक्छन्. तपाईं आफ्नो खेल सुरु गर्नु अघि आफ्नो रुचि छनोट चयन गर्न सक्नुहुन्छ. जहाँ तपाईं एक सम्म जीत गर्न सक्छन् Slingo को विजेता संभावित विशाल छ £ 2,50,000 Jackpot. यो जीत गर्न £ 2,50,000 Jackpot, तपाईं सकेसम्म रेखाहरूको अधिकतम संख्या भर्नका लागि आवश्यक. यसलाई डिजाइन गरिएको छ र जो जुन kinase गेमिङ सफ्टवेयर विकासकर्ताले विकास र तिनीहरूले ग्राफिक्स र गेमप्लेको केही साँच्चै अचम्मको काम गरेका.
प्ले ठूलो मुद्रा Slingo र जीत £ 2,50,000 Jackpot
यो Slingo बस एक प्रकारको छ. बस खेल सुरु मा, तपाईं छ स्थानहरूबाट खेल्न बीच चयन गर्न एक मौका दिइएको. स्थानहरूलाई छन् Jokers Hamlet, सुनको फिल्ड, शाही वन, तस्करों Cove, हीरा पिक र भाग्यशाली Gulch. यी स्थानहरु प्रत्येक जोकर गरेको Hamlet लागि 50p रूपमा कम बाट सुरु हुन्छ र भाग्यशाली Gulch लागि £ 15 पुग्यो कि फरक लागत छ. यी स्थानहरूमा प्रत्येक को गेमप्लेको नै छ. मात्र फरक पुरस्कार पैसा र खेलको इन्टरफेस छ. तपाईं एक लो लागि एक मौका छ £ 2,50,000 Jackpot यो खेल को अन्त द्वारा.
ठूलो मुद्रा Slingo बोनस गेमप्ले
यो अचम्मको खेल को गेमप्लेको धेरै सरल छ. बित्तिकै यो सुरु रूपमा, तपाईं दिइनेछ6ठाउँका विकल्पहरू मा प्ले गर्न चाहनुहुन्छ. तपाईं छ विकल्पहरू मध्ये एक चयन पछि, तपाईं मुख्य स्क्रिनमा लगिनेछ. प्रत्येक शर्त तपाईं दिन्छ6spins र तपाईँले रेखाहरूको अधिकतम संख्या बनाउन छ. तपाईं अब सुरु बटन र अप गर्न क्लिक गर्न छ4Jokers आफ्नो बोर्ड मा देखाइने. प्रत्येक स्पिन या त एक नम्बर वा निःशुल्क स्पिन प्रकट हुनेछ. को गेमप्लेको सुरु मा थपिएका थिए कि jokers कि बक्स कब्जा र तपाईंले तालिका तिनीहरूलाई बन्द चिनो हुनेछैन. प्रत्येक लाइन लाइन लागि प्रतिस्पर्धा द्वारा जित्न सक्छौं कि नगद राशि देखाउन यसको टाउको मा एक तीर हुनेछ. तपाईंले एक रूपमा ठूलो जित्न सक्छौं £ 2,50,000 Jackpot यी रेखाहरू खत्म द्वारा.
Slingo केही साँच्चै अचम्मको नियम र धेरै आकर्षक ग्राफिक्स छ. यो स्पष्ट एक विशाल संग एक भीड pleaser छ £ 2,50,000 Jackpot र एउटा सजिलो गेमप्लेको. तपाईं एक बिंगो वा स्लट प्रशंसक छन् भने पक्कै पनि धेरै मजा छ यो प्ले जाँदैछन्.